Transgender Day of Remembrance (2020)နေ့ အထိမ်းအမှတ် အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ – CAN-Myanmar
Thu 5, 12:00 am
Transgender Day of Remembrance (2020)
Transgender Day of Remembrance ဆိုတာ အမုန်းပွားမှု တွေကတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်ခံရပြီး အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲဝတ် ဆင်နေထိုင်သူ (Transgender) တွေကို အောက်မေ့သတိရ ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး နှစ်စဥ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတို့မှာ အောက်မေ့သတိရပွဲအဖြစ် အ ထိမ်းအမှတ် ပြုလို့ကျင်းပကြတဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်
၂၀၂၀ TDOR မြန်မာ အထိမ်းအမှတ်ပြိုင်ပွဲ
ဒီကနှစ်မှာတော့ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူများအရေး လှုပ်ရှားတဲ့ ကံမြန်မာကနေကြီးမှူးပြီး လူထုအကြားမှာ Transgender အကြောင်း၊ Transgender များကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြလိုတဲ့ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ကျင်းပပေးတဲ့၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ LGBTI ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ အားလုံး ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်မယ့် “၂၀၂၀ ခုနှစ် တီဒေါမြန်မာ အထိမ်းအမှတ်ပြိုင်ပွဲ” လေးလာပါပြီ။
ပညာပေး ဗွီဒီယို၊ Tik Tok နဲ့ဓါတ်ပုံ လေးတွေရိုက်ရင်း၊ ကဗျာလေးတွေ ရေးရင်း ဆုငွေ ၁ သိန်းကနေ ၃ သိန်း အထိ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် !!!
(၁) ပညာပေး ဗွီဒီယို ကလစ်တို
(၂) “Tik Tok” ဗွီဒီယို
ပြိုင်ပွဲဝင် ဗွီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ နဲ့ စာမူတွေဟာ အပျော်သက်သက်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်သို့ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေ နေ့တဓူဝ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေ၊ အကြမ်း ဖက်ခံရမှုတွေ၊ ဖယ်ကြဥ်ခံရမှုတွေစတဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာတွေကို ထင်ဟပ်အောင်ပုံဖော်ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုဖတ်ရှုတဲ့သူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို သတင်းစကား မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုခု ပေးမယ့် ဗွီဒီယို၊ ဓါတ် ပုံနဲ့ စာမူမျိုး ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား ၄ မျိုးလုံးကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပညာပေး ဗွီဒီယိုတွေဟာ အချိန် ၃ မိနစ်တဲ့မပိုတဲ့ ဗွီဒီယိုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Resolution ကောင်းမွန်ပြီး ပြိုင်ပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ တင်ဆက်မှုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
၁ မိနစ် စာရှိပြီး Tik Tok application ကိုအသုံးပြုလို့ ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ Tik Tok ကို မိမိရဲ့ facebook မှာ တင်ပြီး ယှဥ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကတော့ ကာလာ ဓါတ်ပုံတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး အခြားအထူးကန့်သတ်ချက်များ မရှိပေမယ့်လည်း ပြိုင်ပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ တင်ဆက်မှုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာကတော့ A-4 တစ်မျက်နှာထက်မပိုတဲ့ ကဗျာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ တင်ဆက်မှုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားအားလုံးဟာ ကံမြန်မာအဖွဲ့ ကနေကြီးမှူးပြုလုပ်တဲ့ Online campaign အစီအစဥ် များအနက် တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ယှဥ်ပြိုင်သူတွေအားလုံးဟာ မိမိတို့ Face-book စာမျက်နှာမှာ မိမိတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗွီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ နဲ့ ကဗျာစာမူတွေကိုတင်တဲ့အခါ
#တို့တွေလဲလူထဲကလူပဲ စတဲ့ Hash-tag တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hash-tag အပြည့်အစုံရေးမတင်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဥ်းစား သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်မယ့်သူတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗွီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ နဲ့ စာမူတွေကို မိမိတို့ရဲ့ Facebook မှာအထက်ပါ hash-tag များနဲ့ တင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ဖြစ်ကြောင်း TDOR Myanmar ရဲ့ ပေ့ချ်ဖြစ်တဲ့
Trans gender Day of Remembrance – Myanmar TDOR – Myanmar
ကို mention ခေါ်ပြီးဖြစ်စေ၊ Chat box မှဖြစ်စေ အသိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိပေးလာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် Page moderator (organizer) တွေဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ ပို့စ်ကို Share လုပ်ပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင် Piece တွေကို CAN-Myanmar မှ Event organizer နဲ့ အမှတ်ပေးဘုတ်အဖွဲ့မှ အမှတ် တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး…
ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ မူရင်းပို့စ်မှာ ရှိတဲ့ Like တစ်ခုကို တစ်မှတ်၊ Share တစ်ခုကို တစ်မှတ် နဲ့ အပိုဆောင်း ထည့်သွင်းပြီးတော့လည်း အမှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် !
ပထမဆု – ကျပ်ငွေ ၃ သိန်းနှင့် ကံမြန်မာ၏ TDOR Myanmar 2020 Webinar တွင် Guest Speaker အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်
ဒုတိယဆု – ကျပ်ငွေ ၂ သိန်း
တတိယဆု – ကျပ်ငွေ ၁ သိန်း နှင့်
နှစ်သိမ့်ဆု ၂ ဆု (၁ ဆုလျှင် ၅ သောင်းကျပ်စီ) တို့ကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။